iOS 4 ye iPhone | IPhone nhau
Mugore 2010 Apple yakaburitsa iOS 4 ine anopfuura zana zana maficha izvo zvakaunza kuita kwakasiyana siyana kune nhare inoshandisa system inowanikwa pane iyo iPhone, iPad, uye iPod Touch. Iyo multitask Kwakave iko kwakanyanya kukosha kuvandudza kwakatibvumidza isu kushandisa mashandiro kumashure tichishandisa chero chimwe chirongwa. Imwe yekuvandudza kukuru kune iOS 4 yaive iyo kuoneka kwefaira, nzvimbo iyo yatinogona kuisa akati wandei mashandiro eiyo genre yekuchengetedza iyo yekutenderera yakarongeka uye kudzivirira nyonganiso yekuve nemapeji azere nemifananidzo.
Chii uye nezveani chishandiso cheTinyCFW
kubudikidza Gonzalo R. inoita 11 makore .
Nezuro takataura nezve chishandiso cheTinyCFW, chirongwa chakagadzirwa nemugadziri weTinyUmbrella yeshamwari yake, kubva ...
Dhawunirodha yako iOS, Redsn0w, Sn0wbreeze, TinyUmbrella
Dzidziso: Kudzikisa pasi kubva kuIOS 5 kuenda kuIOS 4.3.3
Wakagadziridza here kuti uve shanduro 5.0 uye ukamhanyisa untethered jailbreak? Pane chero ako ekushandisa asiri kushanda uye ...
Dzidziso: Kudzikisa pasi kubva kuIOS 5 kuenda kuIOS 4.3.3 (iPad 1 uye iPad 2)
kubudikidza IPad nhau inoita 11 makore .
Vazhinji venyu vatove neIOS 5 yakaiswa pane yako iPads uye iPads 2, kana usati watove ...
ONA. OUTDATED TUTORIAL -> SHANDISA IYI LINK Vazhinji venyu vatove neIOS 5 yakaiswa pane ako maPhones, kana iwe ...
Dzidziso: maitiro ekuita jailbreak untethered kune iOS 4.3.3 uchishandisa Redsn0w
Nedzidziso iyi iwe unozogona kukanda jailbreak untethered kuIOS 4.3.3 kubva paWindows uye kubva kuMac.Inoshanda pa iPhone 4, iPhone 3GS,…
Dzidziso: maitiro ekuita jailbreak untethered kune iOS 4.3.1 uchishandisa Redsn0w
Neichi chidzidzo iwe unozogona ku jailbreak untethered kune iOS 4.3.1 kubva kuWindows uye kubva kuMac.Inoshanda pa iPhone 4, iPhone ...
Whited00r inounza iOS 4.3 ku iPhone 3G uye 2G
Sezvamunoziva, iyo iPhone 3G yasiyiwa kunze kweazvino iOS 4.3 kugadzirisa, asi vakomana pa ...
Apple inosiya iyo iPhone 3G isina iOS 4.3
Icho chiri pamutemo, iyo iOS 4.3 betas haina kutsigira iyo iPhone 3G (kana iyo iPod Kubata 2G) asi ...
Yakazara iOS 4.2.1 jailbreak roundup
iPhone 2G (iPod Kubata 1G) 1. Unogona kushandisa tsika yeWhited00r firmware, iyo inowedzera zvese zvitsva zveIOS ...
Dzidziso: gadzira yakajairwa firmware 4.2.1 ine jailbreak untethered neSn0wbreeze 2.2 (Windows)
Nedzidziso iyi iwe unozogona kugadzira yakasarudzika firmware 4.2.1 ine jailbreak untethered kubva kuWindows. Inoshandiswa kune: iPhone 3G ...